Mouvance Ravalomanana | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Mamy Rakotoarivelo : « tsy maintsy tafody alohan’ny 18 oktobra i Dada » (+vidéos)
Araka ny fanzavana nentin’i Mamy Rakotoarivelo teo amin’ny Kianjan’ny Finoana dia tapitra amin’ny 18 oktobra hoavy izao ny fe-potoana 60 andro nangatahin’ny SADC hanaovana toban’ezaka mikasika ny fepetra ara-piarovana sy fandriam-pahalemana manodidina ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA. Ny fivoriana natao tatsy Maputo Mozambika ny faha-17 sy 18 Aogositra teo manko no nadraisan’ny SADC izany fanapahan-kevitra izany. « Tsy maintsy tafody an-tanindrazana mialoha ny 18 oktobra ny Filoha noho izany » hoy hatrany ny lehiben’ny delegasiona. Niantso ny fiaraha-mientan’ny mpitolona rehetra arak’izany ny tenany mba hanamafisana ny firaisan-kinan’ny mpiara-mitolona.
Mpiray tsikoimbakomba ny vondrona iraisam-pirenena ?
Raha sanatria ka manaiky ny tsy hilatsahan’ny Filoha RAVALOMANANA ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia « raisina ho mpiray tsikombakomba amin’ny mpanongam-panjakana sady isan’ny tomponanadrikitra amin’ny krizy politika eto Madagasikara » hoy Mamy Rakotoarivelo. Mbola misy manko ireo Firenena sasantsanay izay te-hanome vahana ny « ni-ni » ary i Rajoelina kosa dia nanambara tany New York fa « tan-dalàna i Madagasikara » ka izy tenany afaka mirotsaka ho fidiana fa ny Filoha RAVALOMANANA tsy mahazo manao izany. Nazavan’i Mamy Rakotoarivelo anefa fa, araka ny fifanarahana tany Cotonu sy ny sata afrikana momba ny demokrasia dia tsy mahazoi milatsaka ho fidiana ny mpanongam-panjakana. Mba hahafantarana marina ny safidim-bahoaka anefa dia « takiantsika ny hilatsahany ho fidiana » hoy hatrany Rakotoarivelo.
« Tsy mandrangitra adim-poko aho »
Fanazavana mikasika ny fangatahana hanesorana an’i Ruffine Tsiranana kosa no tapany fahatelo tamin’ny lahatenin’i Mamy Rakotoarivelo. Nambarany fa misy taratasy mandeha any ho any milaza fa manavakavaka ara-piaviana ny tenany satria manala ny tanindrana ary mametraka ny avy eto afovoan-tany. « Tsy avy amiko mihitsy izany ary mino aho fa matoky ahy amin’izany ianareo » hoy ihany Mamy Rakotoarivelo. Nambarany ihany koa fa nifampidinihan’izy ireo tamin’ny Filoha RAVALOMANANA ny momba nan’i Ruffine Tsiranana tamin’ny fotoana niantsoan’ny Filoha ireo mpikambana ao anaty delegasiona dimy Afrika Atsimo.
Fanaovan-tsonia tany New York : latsa ho an’ny zanaka Malagasy (+vidéo)
Fifanarahana roa no nataon’i tgv sonia tany New York nandritra izao fandalovany any an-toerana izao. Ny iray mikasika ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty ary ny faharoa dia momba ny zon’ny ankizy. Ity farany izay toa mandatsa ny kilonga Malagasy ihany indrindra fa fantatra antsipirihany ny vokatry ny fanonganam-panjakana amin’ny taranaka amin’izao fotoana. Milaza fa manaiky hampanaja ny zon’ny ankizy izy nefa manakana ny hidiran’ny zanaka Malagasy any an-tsekoly. Nandritra ny fotoana nitondrany tokoa dia lasa mandoa vola aman’aliny ny fidirana an-tsekoly raha efa maimaim-poana izany tamin’ny fotoana nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA.
Nanjavona tateraka ny fanampiana ny Ray aman-dReny hany ka zary vesatra hafa nateraky ny krizy indray ny fampidirana ny sombiniaina hianatra. Manginy fotsiny ny fahasarotana vokatry ny asa tsy misy sy ny seha-pihariana maro nikatona noho ny fanonganam-panjakana. Ny tsaroan’ny Malagasy aloha hatreto dia ny fanamaivanana ny fahasahiranany nandritra ny taona maro nifantohan’ny fitondrana RAVALOMANANA tamin’izany fanabeazana ho an’ny rehetra izany. Nisy ny « kit scolaire », nahazo sakafo maimaimpoana ny mpianatra miampy ny saronakanjo (tablier) maintso izay mbola saloran’ny solofo dimbin’ny ala hatramin’izao. Araka ny nambaran’i Constant Raveloson dia « haka sary no tena nahamaika » an’i tgv. Nazavainy rahateo fa mila mandalo any amin’ny parlemantera ny fandaniana ireny fifanarahana iraisam-pirenena hatao sonia ireny.
Vehivavy TIM : mpiara-mitolona arivo no nahazo fanampiana
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana eo amin’ny Magro Behoririka, araka ny fampitam-baovao, ny fanentanana isan-karazany mba hanafanana izany kianja izany. Ho an’ny vehivavy Tiako I Madagasikara dia fanamafisana ny fiomanana amin’ny fitsenana ny Filoha RAVALOMANANA ihany koa izany. Vary fotsy no nozaraina hoan’ny mpiara-mitolona arivo tonga voalohany teo amin’ny Kianjan’ny Finoana mba ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ny mpiara-mitolona. « Tsy hanin-kahavoky anefa fa tolo-tanana ihany » hoy ny vehivavy TIM.
Hetsika Vehivavy TIM
Raha ny voalazan’ny mpandrindra dia tsipaipaika avy amin’ireo mpikatroka miampy ny fanampian’ireo malala-tanana no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Voalaza moa fa tsy vanim-potoana fiandrAsam-potsiny intsony izao koa dia mandray ny anjara manandrify azy ny vehivavy TIM.
Zafilahy Stanislas : « tsy misy resaka foko ny fanoloana tomponandraikitra » (+vidéo)
Niteraka resa-be teo amin’ny mpanara-baovao ny fanambarana an-gazety nataon’i Mamy Rakotoarivelo mikasika ny fangatahana ny hanoloana ny ministry ny fitsinjaram-pahefana. Ankoatra ny tsikera isan-karazany dia nisy nanodina mankany amin’ny resaka fiaviana ny anton’izany fangatahana izany. Nazavain’ny depiote Zafilahy Stanislas androany fa « tsy misy ifandraisany amin’ny resaka foko velively ny fanapahan-kevitra noraisin’ny delegasiona ». Nijoroany vavolombelona moa ny fifandraisany amin’ny Filoha RAVALOMANANA izay tena manaporofo fa tokana ny Malagasy ary tsy misy ataon’ny Filoha tombo sy hala indrindra raha resaka fiaviana izany.
« Adidin’ireo rehetra notendrena handray andraikitra amin’ny tetezamita ny manandratra avo ny Filoha RAVALOMANANA sy ny Ankolafy tarihiny» hoy hatrany i Zafilahy « ka izay rehetra tsy mahavaly izany mason-tsivana izany dia afaka soloina avy hatrany ». Nambarany koa anefa fa tsy noraisin’i Mamy Rakotoarivelo samy irery akory iny fanapahan-kevitra mikasika an’i Ruffine Tsiranana iny fa « nifampidinihana » tamin’ny Filoha RAVALOMANANA.
Iza no hasolo azy ?
Efa namoaka fanambarana i Guy Rivo Randrianarisoa, mpitondra tenin’ny Filoha RAVALOMANANA, fa tsy handray izany toerana izany satria ny tanjony dia ny hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara sy ny hahafahany hilatsaka ho fidiana indray. Nambarany tao anatin’io fanambarana io koa fa, ankoatra ny fanajany ny maha-nasionaly ny Ankolafy, dia mety hanelingelina ny fahafahany mitondra ny tenin’ny Filoha RAVALOMANANA ny fidirany ao anaty governemanta ka tsy azony ekena velively. Miendrika fanontaninaa kosa ny lohatenin’ny gazety lehibe iray teto an-drenivohitra androany mikasika ny mety hametrahana an’i Naika Eliane eo amin’ny toeran’ny ministry ny fanapariaham-pahefana. Nilaza moa i Naika Eliane fa tsy fahamendrehana ny mandray toerana ministra rehefa avy nandà tsy ho praiministra ny tenany. Araka ny loharanom-baovao sasantsasany kosa dia mitaky anarana telo hatolotry ny Ankolafy RAVALOMANANA hisolo an’i Ruffine Tsiranana i Rajoelina. Nanamarika koa ity farany, araka ny vaovao hatrany, fa tsy maintsy hajaina ny fitsinjaran’ny lahy sy ny vavy eo amin’ny mpikambana amin’ny governemanta sy ny fiavian’izay hiditra hitantana ity departemanta iray ity.